डकुमेन्ट्री शिक्षाको खोज बृत्तचित्र बारे छोटकरीमा (२०६९ भाद्र ११, आइतवार)
एक फरक पाठशाला
उचाईले भूई नछाड्दै परिवारको जिम्मेवारी बोकेका जुम्लेली बालक जसले यार्शागुम्बालाई भविष्य सम्झेका छन् । महिनादिन स्कूल छाडेर यार्शा नटिपे स्कुल जाने कापी कलम र घरमा हातमुख जोर्न समेत गाह्रो हुन्छ परिवारैलाई । नपढे तत्काल हातमुख जोर्न बन्द हुन्न तर यार्शा नटिपे बन्द हुन्छ भन्ने उनको बुझाई छ । विना पुस्तक च्यातिएका चप्पल र उधि्रएका पाइन्ट घन्टौ पैदल हिंडेर स्कुल जानु उनि जस्ता धेरै बालबालिकाको बाध्यता हो । त्यस्तै अर्का डोल्पाली बालक जसले रारा तालमाथि हेलिकप्टर उडाउने रहर बोकेका छन् तर विडम्बना शैक्षिक सत्र सुरु भएको आधा वर्षसम्म उनको हातमा पुस्तक पुगेको छैन । राजधानी काठमाण्डौंकै त्यही उमेरकी बालिका जो घरको दैलोदेखि स्कुलको गेटसम्म बाबाको कारमा दैनिक पढ्न आउने जाने गर्छिन । पढ्न जाने झोला बोक्नुपर्दैन अनि धुलोले समेत छुँदैन उनलाई । घरमै तयारी टिफिन बिहान साँझ पनि सन्तुलित भोजन विश्वलाई बुझ्न इन्टरनेट । यि फरक परिवेश फरक वातावरण फरक स्कुल र फरक शिक्षा देश नेपाल शिक्षाको कानूनी आँखाबाट हेर्दा विषम असमानता तर बाध्यता । पर्यटकिय रुपले २,४ दिन मनोरम र कामको बोझ बिसाउने चौपारी भएपनि स्थानीयलाई तिनै पहाड र हिमाल कस्टकर जीवनको कारक । यी र यस्तै अवस्थाका जीवनलाइृ शिक्षाको खोज वृत्तचित्र डकुमेन्ट्री मा उत्तारिएको छ । डकुमेन्ट्रीमा मानव सभ्यतासँगै शिक्षा गुरु र विद्यार्थीको उदय अनि ऋषिमुनिको कुटीको पाठशाला परापूर्वकालमा विभिन्न अवस्थाको फरक फरक शिक्षालाई कोट्याइएको छ । यसलाई शिक्षा विकासको पाइला भनेर बुझ्न सकिन्छ । राणाकालमा आएर राजा महाराजा र धनीमानीमा सीमित शिक्षा अहिलेको नीजि स्कुलको अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा हुँदै कर्णालीका स्कुल शिक्षक र विद्यार्थीले धानेको शिक्षालाई देखाइएको छ । पढाउन सँग पाठ्यपुस्तक र बाँच्नको लागि स्थानियले बर्षेनी हिउँका यार्शासँग गर्ने संघर्षको मार्मिक दृश्यलाई डकुमेन्ट्रीमा समेटिएको छ । जहाँ अधिकांश स्कुले बालक समेत सहभागी छन् । डकुमेन्ट्री हेरिसकेपछि सरकारको शिक्षा नीति शैक्षिक योजना शैक्षिक कार्यक्रम र लगानीलाई सम्झिन जो कोही पनि बाध्य हुन्छ । एउटै पाठ्यक्रम एउटै पाठ्यपुस्तक र एउटै उद्देश्य तर फरक भौगोलिक अवस्था फरक आर्थिक अवस्था र अर्थ अनुसारको शैक्षिक अवसर । एउटै शिक्षा प्रणाली एउटै प्रश्नपत्र र एउटै जागीको अवसर । यी र यस्तै प्रश्नहरु नजरभरि भुमिरहन्छन् । आखिर नागरिकलाई शिक्षा दिनमा जिम्मेवार को प्रश्नको उत्तर पाउन सरोकार पक्षले माटो सुहाउँदो र बाँच्न सिकाउने शिक्षा नीति निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । वृत्तचित्र ७० मिनेटको रहेको छ । इस्ट च्यानलूले निर्माण गरेको हो । जुम्ला डोल्पा मुगु कालिकोट काठमाण्डौं र पोखरा लगायतका ठाउँमा वास्तविक पात्रको वास्तविक जीवनलाई छायाँकन गरिएको छ । डकुमेण्ट्री जीवन भट्टराईुको निर्देशन विनोद कार्कीको छायाँकनमा तयार गरिएको हो । शिक्षामा खोजु डकुमेण्ट्री शैक्षिक सिकाईका हिसाबले एउटा फरक पाठशाला बन्न सक्छ । जहाँ शिक्षाको इतिहास सुविधा सम्पन्न शहरको शिक्षा विकट गाउँको शिक्षा बारे देख्न र बुझ्न सकिन्छ । यसका विद्यार्थी भनेका शिक्षाका नीति निर्माताहरु शैक्षिक कार्यकर्ताहरु नीजि र सामुदायिक स्कुल संचालकहरु शिक्षकहरु अभिभावकहरु र सिक्दै गरेका विद्यार्थीहरु हुन् । आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालय तह र नेपालका कुनाकाप्चा देखि विदेशमा पनि यसको क्षेत्र हुन सक्छ । डकुमेण्ट्रीले सबैलाई एकपटक जुरुक्क उचाल्छ अनि सोच्न बाध्य तुल्याउँछ । डकुमेण्ट्रीका दृश्यले बुझाउन सक्छ सिकान सक्छ र गर भनेर भित्रैदेखि हृदय पगाल्छ । हो त्यसैले यो एक फरक पाठशाला हो ।
Organising committee for Arghakhanchi show:-
CO-ORDINATOR : BISHAL PANTHI MEDIA : SUBASH ACHARYAPRADIP NEPALI FUND TREASURERS : SUBASH KSHETRYNAFEESH KHANEDITOR: DOBIN BHUSALAAKASH BHUSAL AMRIT SHRESTHA VENUE MANAGER : PRAKASH POUDEL SURAJ K C HIMAL MAHATSUDHAN K C SUSHIL POUDEL Copyright 2012 Arghakhanchi.Com. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
अहिलेसम्म ६७१३५४४३ पटक भिजिट गरियेको छ । प्राविधिक सहयोगी संस्था - बेष्ट नेपाल प्रा. लि.